၄၁ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ သမီးလေးဆီက ပထမဆုံးလက်ဆောင် ရလို့ကြည်နူးတဲ့ လူမင်း | Pop Vlog
၄၁ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ သမီးလေးဆီက ပထမဆုံးလက်ဆောင် ရလို့ကြည်နူးတဲ့ လူမင်း
Posted by popVlogger on May 11th, 2011 in 24 hours, A week |0comments	Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.
၂၀၁၁ခုနှစ် မေလ ၇ ရက်နေ့မှာ အသက် ၄၁ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူအဖြစ် လူမင်းက နေအိမ်မှာ ဘုရားပင့် ပြီးပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ မွေးနေ့အမှတ်တရနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူမင်းက “ဒီနှစ်မွေးနေ့လေးက နည်း နည်းထူးခြားတယ်။မနက်အိပ်ရာနိုးတာနဲ့ နမောတဿ ရွတ်တယ်။ ပြီးတော့ အ၀တ်အစားလဲပြီးတာနဲ့ ဘုရားစင်ရှေ့မှာ အနန်္တာ အနန်္တ ငါးပါးကို ကန်တော့တယ်။ ဘုရား ကန်တော့ပြီး မိဘတွေကို ကန်တော့ တယ်။ မိဘဆိုတာ အမေကဆုံး သွားတော့ အမေ့ဓာတ်ပုံရှေ့မှာ ကန် တော့တယ်။ ကန်တော့တော့ အမေ့ကျေးဇူးကို တော်တော်လေး သတိရ၀မ်းနည်းမိတယ်။ ဒီလို ဘုရားပင့်ပြီး ပူဇော်ဖြစ်တာက အစ်ကိုက ဘာသာရေးကို ပိုစိတ်ဝင် စားပြီးပိုလုပ်ချင်လာတယ်။ မွေးနေ့ ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလည်းပွဲလမ်း သဘင်လုပ်လေ့လုပ်ထတော့ သိပ် မရှိပါဘူး။ ဒီနှစ်မွေးနေ့ကိုလည်း ဘုရား၊ တရားလေးနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်း မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ။ ဒီလို ဖြတ်သန်းတာက တကယ်အနှစ်သာ ရရှိတဲ့ မွေးနေ့ပေါ့။ လူငယ်တွေနဲ့ အတွေးအခေါ်အယူအဆတူချင်မှ တူမယ်။ အစ်ကိုဆိုလိုတာက မွေး နေ့မှာ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း တွေနဲ့ ပျော်တာရွှင်တာကလည်း ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မွေးနေ့ ဆိုရင် သတိရဖို့ကတော့ မိဘကျေး ဇူးကိုမမေ့ဖို့တော့သတိပေးချင်တယ်။ ဒီနှစ်မွေးနေ့မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆင် ခြင်မိတာကတော့ ဘာသာတရား လေးကို ပိုပြီးဒီထက်တိတိကျကျ အချိန်ပေးပြီး လုပ်ချင်လာတဲ့ စိတ် တွေဖြစ်တယ်။ ရှေ့လျှောက်မွေးနေ့ မှရယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာ တရားပိုပြီး လုပ်ဖြစ်အောင် ကိုယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကြိုးစားသွားမှာပါ”လို့ ဆိုပါတယ်။
မွေးနေ့နံနက်ကလည်းကစပြီး ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုတဲ့ လူမင်းက…
“ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိထားမိ တာက အသေးအဖွဲလေးကအစ အကုန်ဖြစ်ချင်တာပဲဖြစ်တယ်။ ဘုရားပင့်ပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားကို တက် တော့ လမ်းမှာ တောက်လျှောက် မီးပွိုင့်မမိဘူး။ ဘုရားမှာ အထက် ပစ္စယံမှာ လက်ယာရစ်တစ်ပတ်ပတ် ပြီး ပူဇော်ပြီး ဘုရားသေသေချာချာ ရှိခိုးခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ကိုလည်း ဥပုသ် စောင့်ဖြစ်မှာပါ”လို့ပြောပြပါတယ်။
မွေးနေ့လက်ဆောင်ကို မမျှော် တတ်ပေမယ့် မွေးနေ့မတိုင်ခင် တစ် ရက်မှာ ကြိုပြီးသမီးဆီက မွေးနေ့ လက်ဆောင်ရတယ်လို့ဆိုတာကြောင့် ….
“သမီးက အရင်ဆုံး ပန်းစည်း နဲ့ ဟက်ပီးဘတ်ဒေးဖေဖေဆိုပြီး ပေး တယ်။ ဒီနှစ်အတွက် ပထမဆုံး လက်ဆောင်ပါပဲ။ သမီးက အဲဒီလို ပေးတဲ့ အချိန်မှာ ရင်ထဲမှာ လှိုက်ခ နဲ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူး။ အဲဒီပီတိက တစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးဘူး”လို့ ပြောပြပါတယ်။
အမျိုးအစားအလိုက်	24 hours
တင်ထားသမျှ	March 2012
လောလောဆယ်တင်ထားသမျှ	2010 Academy Time Line
သက်ကြီး ကာတွန်း ဆရာကြီးများ ပူဇော် ကန်တော့ပွဲ
Powered by Asian Fame Media Group | Designed by AFIT Team & TweetyCoaster